Fanafihana mitam-piadiana • AoRaha
Naratra mafy ny lehilahy iray miasa amin’ny orinasa mpiompy dingadingana, any Toliara, omaly maraina. Niharan’ny fanafihana nataon’ny jiolahy roa nitondra basy poleta izy. Notifirin’izy ireo intelo itsy lehilahy itsy, nandritra ny fandroban’izy ireo ny vola telopolo tapitrisa ariary vao avy nosintonina tany amin’ny banky.
Tao anatin’ny minitra vitsy monja no nisehoan’izany rehetra izany, omaly antoandro. « Mety efa fantatr’ireo jiolahy mialoha ny fahatongavan’ilay lehilahy haka vola. Mpitantam-bola ao amin’ny orinasa iray eto an-toerana izy. Nataony tao anaty sakaosy ireo vola nalainy tao amin’ny banky iray eto afovoan-tanàna. Nandeha posy bisikileta izy, taorian’izay, kanjo niharan’ny fanafihana. Nanohitra ihany izy saingy nitifitra ireo jiolahy ka naratra mafy. Nalefa notsaboina haingana eny amin’ny toeram-pitsaboana iray eny Andaboly, avy eo », hoy ny loharanom-baovao avy amin’ny mpitandro filaminana, any Toliara.
Nifandrimbona nameno ny tanànan’i Toliara ny polisy sy ny zandary tany an-toerana vao naheno an’io fanafihana io. Hita tamin’ny toerana nitrangan’ny fanafihana ny vodim-bala telo avy nipoaka. Nisy koa ny sakana tany amin’ny lalam-pirenena mivoaka sy miditra ny tanàna, saingy tsy mbola nahitambokany ny fikarohana an’ireo mpanao ratsy.